Njem Buharị: ọ bịara ịnata nkwado Tinubu maka 2019? - BBC News Ìgbò
Njem Buharị: ọ bịara ịnata nkwado Tinubu maka 2019?
Nkenke aha onyonyo Buhari mere Tinubu onye isi otu na-ekere ndị otu APC na-ese okwu udo
Ọtụtụ ndị njem gụnyere ndị njem ụgbọelu, ji ụkwụ gaa ogologo ụzọ n'ụbọchị Tọọsde, Maachị 29, na Legọs dịka e mechiri okporoụzọ na-aga ọdọụgbọelu na ụfọdụ okporoụzọ maka na onyeisiala Muhammadu Buhari gara njem nleta abalị abụọ na steeti ahụ.
Buhari gara mepee nnukwu ọdọụgbọala n'isi obodo Legọs bụ Ikeja, ma mecha gaa ọgbakọ mkparitaụka e hiwere iji mee ncheta ụbọchị ọmụmụ onyendu otu APC bụ Bola Ahmed Tinubu, onye gbara afọ iri isii na isii (66).
— Akinwunmi Ambode (@AkinwunmiAmbode) 29 Maachị 2018
Mana dịka ndị ma ihe ekwe na-akụ n'ihe gbasara ndọrọndọrọ ọchịchị kwuru, njem ahụ abụghị ihe a kpọrọ ya ka ọ bụ, kama na ọ bụ ịwụ ala mmiri maka ntuliaka 2019.
N'ụbọchị Wenesde, gọọmentị Legọs steeti mara ọkwa mmechi ọrụ nakwa okporoụzọ ụfọdụ maka abalị abụọ; ụbọchị Tọọsde na Fraide, Buhari ga-eme njem ahụ.
Nke metụtara ebe ọ dị ukwuu, mkpagharị ndị mmadụ, azụmahịa na iji ego chụọ ego na steeti nke na ọtụtụ ndị mmadụ kwusịrị ọrụ, ahịa, ebe ọtụtụ, nke mere ka nde kwuru nde ego gbanahụrụ steeti ahụ n'ihi njem onyeisiala.
Ndị njem ụgbọelu atọla taa
Melaye chọrọ ịgba onyeisi uweojii akwụkwọ
Ndị uweojii Kogi na-achọ Dino Melaye
Nke a kpasuru ọtụtụ mmadụ iwe nke mere na ha tụrụ arịrị n'igwe okwu Twitter:
Skip Twitter post by @Official_VicM
So i heard LAGOS the 4th Larqest city.. A city tha Generates $250million everyday is shutdown.. Cus #PMBinLagos is cominq to commission of-all-freakinq-thinqs a common Bus Station! Nat even a rail station.. A friqqin' Bus Station! History 'll surely remember u sir.. @Gidi_Traffic
— VIC.. Michaels.. (@Official_VicM) 29 Maachị 2018
End of Twitter post by @Official_VicM
Nke a bụ mbụ Muhammadu Buhari na-abia Legos bụ ebe a maara dịka isi obodo akụnaụba Naijiria kemgbe o jiri banye n'ọkwa ọchịchị afọ atọ gara aga.
Dika Sam Olisa, onye ọkachamara n'ihe gbasara ndọrọndọrọ ọchịchị n'Afrika si kwuo, Buhari bịara Legos maka inweta nkwado Tinubu maka 2019.
"Anyị kwesiri ịmata etu Asiwaju Tinubu si dị mkpa na mmeri Buhari nwere na ntuliaka emeburu na mbụ. Kemgbe o jiri banye ọkwa ọchịchị, Buharị abịabeghị Legọs. Ihe o jiri bịa bụ maka ịnweta nkwado Tinubu na ntulika na-abia na 2019."
Cheta na nsonso a, Buhari mere Ahmed Tinubu onyeisi kọmịti ga-ekpezi esemokwu dị n'etiti ndị otu pati ha bụ APC.
Ọ gara n'ihu kwado ka ewepụ onyeisioche party ha bụ Oyegun, onye nke Tinubu akwadoghị ọchịchị ya n'otu ha.
Nke mere ọtụtụ ndị na-ele ka o sị eme ji ekwu na ọ bụ maka 2019 n'ihi na kemgbe Buhari jiri banye n'ọchịchị, ọ gbakọtara onyendu pati ya bụ APC bụ Ahmed Tinubu onye bụ isi ejiri kwaba okpu n'inyeaka ka onwee mmeri na ntuliaka nke 2015.
Ụfọdụ na-ekwu na ọ bụ Asiwaju bụ onye Aisha Buhari, nwunye onyeisiala, bu n'obi mgbe ọ gwara BBC na mkparịtaụka o nwere n'afọ gara aga na di ya gbakọtara ndị nyerela ya aka na ntuliaka azụ, ma makụọ ndị ya amaghị n'ọchịchị ya.
Tinubu: Oyegun na-egbochi ọrụ ịkpa ụdọ Buhari nyere m
Barcelona asụwacha ukwu, Valencia eburu rijuo afọ
PDP emeriela ntuliaka 2019 na Zamfra steeti
Bịa kwupụta akụnaụba unu nwere n'ihu anyị - CCB